Puerto Rico: Kiaka manohitra herisetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2009 8:36 GMT
Ao Puerto Rico, araka ny tatitra ofisialy nangonin'ny Birao mpiaro ny vehivavy, dia vehivavy 178 no novonoin'ireo olona niaraka niaina taminy teo anelanelan'ny 2001 sy 2008. Tamin'ity taona ity, efa vehivavy 16 sahady no maty noho ny herisetra an-tokantrano tao amina nosy kely ahitàna olona eo amin'ny 4 tapitrisa eo ho eo. Ny salanisan'ny tranga-na herisetra an-tokantrano notaterin'ny mpitandro filaminana dia 20,000 isan-taona. Sasantsasany amin'ireny ihany no naharaisana tatitra. Tamin'ny fanadihadian'izy ireo farany (2007), ny Foibe natokana ho an'ireo Niharan'ny Fanolanana najoron'ny governemanta dia nikajy fa olona 18,000, vehivavy sy ankizivavy ny ankamaroany, no tratry ny herisetry ny filan'ny nofo isan-taona.
Mbola misy maro ihany koa ny vehivavy , ny lehilahy, manohitra ny herisetra amin'ny fomba vaovao sy maro tsy tambo isaina. Androany, 25 Novambra, ao anatin'ny fankalazana ny Andro maneran-tany natao hamongorana ny herisetra atao amin'ny vehivavy, izay manamarika ihany koa ny andro voalohany maneran-tany amin'ny hetsika 16 andro hanoherana ny herisetra [16 Days of Activism Against Gender Violence], dia vehivavy mpitoraka blaogy avy ao Puerto Rico no nanoratra lahatsoratra momba ny herisetra miantraika amin'ny fiainan'izy ireo, amin'ny fianakaviany ary amin'ny fiarahamonin-dry zareo.
Ao amin'ny blaoginy Mujeres en Puerto Rico [ES], Verónica, vehivavy mpisolo vava dia mahatsiaro ny vesatra nentin'ny herisetra nianjady tamin'ireo vehivavy nifanerasera taminy, na nalàna tanatin'izany, teo amin'ny fiainany manokana hatrany amin'ny fahazazàny:
Amárilis Pagán, vehivavy mafana fo, dia niampanga ao amin'ny Brujas y Rebeldes [ES] ireo endrika maro isehoan'ny herisetra izay ny Fanjakana no tomponandraikitra amin'izany.
Nahomi Galindo-Malavé, vehivavy mafana fo, dia manadihady lalina ny endrika marolafin'ny herisetra noho ny tsy fitoviana [of gender violence] ao amin'ny Poder, Cuerpo y Género [ES]:
Nandritry ny iray volan'ny ‘Aoka izay ny herisetra atao amin'ny vehivavy’ [No More Violence Against Women] tsara ny mampahafantatra fa ny herisetra tsirairay dia mifanindran-dàlana amina tambajotra-na fahefana ara-pifandraisana. Amin'io tranga io, ireo fifandraisan'ny lahy sy ny vavy. Izany no mahatonga hoe ireo izay voakasika na “niharan'ny” herisetra noho ny tsy fitoviana dia tsy voatery ho vehivavy foana akory. Ohatra iray tsy ela akory ny herisetra namonoana an'i Jorge Steven López, 19 taona, lehilahy tia lehilahy. Mba hahafahana manakatra io vono-olona io ho toy ny habibiana nateraky ny fankahalana sy herisetra noho ny tsy fitoviana, ilaina dia ilaina tokoa ny mahafantatra hoe manao ahoana ny fahefana ara-pifandraisana ary ny fomba fiorenan'ny fahefan-dehilahy … Vokatry ny fahefana ara-pifandraisana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina misy antsika. Ankoatr'izay, endrika iray isehoan'ny herisetra noho ny tsy fitoviana ateraky ny zavatra azo takarina tsara izay mampihataka sy tsy mifanojo mihitsy amin'ny lamina maha-lahy na maha-vavy mipetraka. Ny heloka ao an-tokantrano, ara-toekarena, famonoana vehivavy sy ny fankahalàna dia endrika samihafa isehoan'ny herisetra noho ny tsy fitoviana daholo.
Ao amin'ny El rincón de la cinefilia [ES], RDLC, izay mamariparitra ny tenany ihany ho lehilahy mpandala ny zon'ny vehivavy, dia mitondra tsikera momba ny horonantsary “What's Love Got to Do with It?” “Inona koa no hidiran'ny fitiavana amin'izay?” sy ny “North Country” “Firenena Avaratra”. Mamintina izy fa:
Mariana Iriarte, vehivavy mafana fo mpianatra lalàna dia miresaka momba ny herisetra atao amin'ny alalan'ny teny sy fihetsika ao amin'ny Con otro y otras en el mundo [ES]:
Ao amin'ny El diario de El Curio [ES], Yolanda Velázquez dia nandefa tononkalo. Ny blaogin'ny fifanatonana Movimiento Amplio de Mujeres [ES] dia manam-baovao momba ny hetsiky ny vehivavy tao Puerto Rico.
Soratra miverina: Voces de denuncia viajan el mundo « Poder, Cuerpo y Género
[…] la contribución de Firuzeh reseñando nuestras entradas ha sido traducidas al francés, al malgache y al […]
07 Desambra 2009, 15:30